परित्याग शहर, भूत सेटिंग्स को माध्यम बाट एक यात्रा | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | शहरहरू, मार्गदर्शकहरू
को परित्याग शहरहरू तिनीहरू सिद्धान्तको रूपमा सबैभन्दा छनौट गरिएको छुट्टी गन्तव्य होईन। तिनीहरू ती स्थानहरू हुन् जुन एक कारण वा अर्को कारणले गर्दा उनीहरूका बासिन्दाहरूले छोडे र कोही पनि उनीहरूमा फर्किएनन्। तर आज यसका भवनहरू र सुविधाहरू क्षयमा जीवित छन् जसले उनीहरूलाई भूतप्रेत उपस्थित गराउँदछ।
una आणविक प्रकोप, लास एक युद्ध पछि वा प्राकृतिक श्रोतको कमी जुन यसको निर्माण सुरु भयो, केहि कारणहरू यी स्थानहरू बस्न छोडेका थिए। तपाईंको भ्रमण पर्यटन गर्ने बिभिन्न तरीका भएको हुनाले हामी तपाईंलाई विश्वका केही प्रख्यात परित्याग गरिएका शहरहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
1 परित्याग गरिएका शहरहरू, एकाकीपनको ठाउँ
1.1 १.- प्रिप्पीट, चेर्नोबिलको प्रभावहरू
1.2 २.- ओरादोर-सुर-ग्लेन, युद्धको मौन साक्षी
1.3 - बोडी, धनी हुने महत्वाकांक्षा
1.4 -.- गुन्कञ्जिमा, एक «ब्याट्लसिप टापु, परित्याग गरिएका शहरहरू मध्ये
1.5 - पिरामिडन, शहरहरूको अर्को उदाहरण आर्थिक कारणले छोडिन्छ
1.6 - भानगढ़, एक गुरुको श्राप
1.7 - हर्क्युलेनम, भेसुभियसबाट नष्ट
1.8 - क्र्याको, एक प्रोमन्टरी को शीर्ष मा एक भूत शहर
1.9 -। कयाकी, परित्याग गरिएको शहर संग्रहालयमा परिणत भयो
1.10 १०-- बेलचाइट, एब्रोको युद्धको शिकार
परित्याग गरिएका शहरहरू, एकाकीपनको ठाउँ
हामी हाम्रो अनौठो यात्रा सुरु गर्नेछौं यूक्रेन यो अन्त गर्न España। बाटोमा, हामी भ्रमण गर्नेछौं फ्रान्स, जापान वा बरफ नर्वे। थप विज्ञापन बिना, हामी हाम्रो यात्रा सुरु गरौं।
१.- प्रिप्पीट, चेर्नोबिलको प्रभावहरू
यो युक्रेनी शहर कामदारहरूको घर बनाउन निर्माण गरिएको थियो चेर्नोबिल आणविक शक्ति संयंत्रदुर्भाग्यवस १ 1986 XNUMX मा दुर्घटनाका लागि प्रख्यात। त्यस समयदेखि यो रेडियोएक्टिभिटीको डरले बसोबास गरिएको छ। तर तिनीहरूका घर र सुविधाहरू अझै पतन देखाउँदै छन् जसले हामीलाई सम्झना गराउँछ कि आणविक ऊर्जा खेल होईन।
Pripyat को परित्याग शहर
२.- ओरादोर-सुर-ग्लेन, युद्धको मौन साक्षी
१ 1944 .642 मा, जर्मन सेनाले यो फ्रान्सेली शहरमा नरसंहार गरे। तिनीहरूले XNUMX XNUMX२ मानिस, पुरुष, महिला र बच्चाहरूलाई मारे। युद्धपछि फ्रान्सेलीहरूले पुरानो शहरको नजिक नयाँ शहर बनाए र यसलाई बर्बरताको जीवित प्रमाणको रूपमा छोडे। हामी हेर्नेछौं, स्पेनमा पनि त्यस्तै भएको थियो गृहयुद्ध.
- बोडी, धनी हुने महत्वाकांक्षा
भित्र स्थित क्यालिफोर्निया, यो शहर धेरै आकर्षित भएकाहरूलाई आश्रय दिन निर्माण गरिएको थियो कि एक मध्ये एक थियो गोल्डन ज्वरो त्यो क्षेत्रमा १ th औं शताब्दीको अन्तमा खोलिएको थियो। छोटो समयमा, यो २० देखि १०,००० बासिन्दाहरूमा बढेको थियो र यस बहुमूल्य धातुमा एक महिना लगभग आधा मिलियन डलर उत्पादन गर्न आयो। यद्यपि २० औं शताब्दीमा यो पहिलेदेखि नै गिरावटमा पर्‍यो र त्यसबेलादेखि यो परित्याग गरिएको छ।
-.- गुन्कञ्जिमा, एक «ब्याट्लसिप टापु, परित्याग गरिएका शहरहरू मध्ये
यो जापानी शहरले यस्तो नाम पाएको छ किनकि यो समुद्रको बीचमा जमिनको एउटा टुक्रा हो जहाँ कोही बस्न सोच्दैनथ्यो। थप रूपमा, क्षेत्रमा टाइफुनहरू सामान्य छन्, त्यसैले यो हानि हुनबाट रोक्नको लागि भित्ताहरू द्वारा घेरिएको थियो।
यद्यपि यसको सम्पत्ती थियो: कोइला। उसको खानीको शोषण गर्न मजदुरहरू र उनीहरूका परिवारहरू लिइयो र टापुमा एउटा शहर निर्माण गरियो। यो क्लस्ट्रोफोबिक भएको हुनुपर्छ, किनकि यो केवल चार सय प्रतिशत एक सय पचास मिटर अग्लो छ। यो शहर १ 1974 XNUMX the मा बसाईएको थियो जब मेरा बन्द भयो। यद्यपि यो हो विश्व सम्पदा.
- पिरामिडन, शहरहरूको अर्को उदाहरण आर्थिक कारणले छोडिन्छ
अघिल्लो जस्तो, नर्वेको शहर पिरामिडेन कोइला खदान कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारहरूको लागि निर्माण गरिएको थियो। सन्‌ १ 1927 २। को सुरुमा यो शहर सोभियतहरूले बेचे जुन उनीहरूको आफ्नै नागरिकलाई औद्योगिक सुविधामा काम गर्न ल्याउँथे। त्यहाँ तिनीहरू बस्न आएका थिए लगभग एक हजार मान्छे सन् १ 1998 XNUMX in मा माइन बन्द नभएसम्म सबैलाई छोड्नुभयो।
- भानगढ़, एक गुरुको श्राप
१ city औं शताब्दीमा निर्मित, यो शहर भारत पौराणिक महाराजाको शासनमा वैभवको समय थियो बहुवंत दास, जसले भव्य दरबारहरूको निर्माण आदेश दिए। तर, यो कथा पछि, एक गुरुले यो शक्तिको विरोधमा शहरमा श्राप उडायो।
विश्वासका अनुसार केही प्रकारको प्राकृतिक प्रकोप जनसंख्या छोड्नुभयो। यद्यपि यो कुरा निश्चितसँग थाहा छ कि यो १ 1720२० मा कब्जा गरिएको थियो र गिरावटमा पर्‍यो र अन्ततः त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई छोडेर गयो।
- हर्क्युलेनम, भेसुभियसबाट नष्ट
दक्षिणीको हरकुलेनियमको परित्याग गरिएको शहर इटाली, संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। ज्वालामुखीको विस्फोटन Vesuvius AD AD एडीमा उनले केही बाँचेकाहरूलाई छोडेर गए। यद्यपि वास्तवमा त्यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरू मरे।
त्यसबेलादेखि यो फेरि कहिले पनि जनसंख्यामा छैन। र यसले सेवा प्रदान गरेको छ ताकि हालका आगन्तुकहरूले देख्न सक्दछन्, लगभग पूर्ण रूपमा, के थियो दैनिक जीवन दुई हजार वर्ष पहिले ल्याटिन शहरबाट।
- क्र्याको, एक प्रोमन्टरी को शीर्ष मा एक भूत शहर
हामी पछ्याउँदछौं इटाली तपाइँलाई अर्को परित्याग गरिएको शहर देखाउनको लागि, यो उजाड उपस्थितिमा, तथ्य यो थप्दछ कि यो प्रमोन्ट्रीमा अवस्थित छ जहाँ यो असम्भव सन्तुलन बनाउँछ जस्तो देखिन्छ। मा मध्य युगहरू यो सम्पन्न शहर थियो जहाँ झन्डै thousand००० मानिसहरू बसोबास गर्थे, भव्य दरबारहरू र युनिभर्सिटी समेत। यसको अन्तिम बासिन्दाहरूले यसलाई १ left २२ मा छोडे र अब यसका परित्याग गरिएका भवनहरूले हामीलाई माथिबाट अवलोकन गर्न नसक्ने अवलोकन गर्दछन् रहस्यको आभा.
-। कयाकी, परित्याग गरिएको शहर संग्रहालयमा परिणत भयो
यस्तो पनि भनिन्छ Livissiयो भूत शहर फेथिएदेखि आठ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ टर्की। यो २० औं शताब्दीको सुरुमा यसको le००० बासिन्दाहरूको सुरुआत भएको समयमा यसको गौरवको समय बाँच्यो।
कायाकीको परित्याग नगर
यद्यपि, तुर्क र ग्रीकहरू बीचको युद्धपछि १ 1922 २२ मा यसलाई त्यागेको थियो। हाल यो कार्य गर्दछ आउटडोर संग्रहालय, यसको सयौं ग्रीक-शैलीका आवासहरू र चर्चहरू। केहि बहाल गरिएको छ।
१०-- बेलचाइट, एब्रोको युद्धको शिकार
ठाउँ जारागोजा डे बेलचेट गृहयुद्ध हुनु अघि समृद्ध शहर थियो। यद्यपि युद्धको बखत यो यस्तै डरलाग्दो लडाईहरूको दृश्य भयो। त्यो एब्रोको हो.
यसको पछि, यो पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो र नयाँ शहरको निर्माण गरियो, जुन पुरानोलाई युद्धको बर्बरताको मौन साक्षीको रूपमा छोडियो। यो प्रकारको यो शहर मात्र होईन जुन तपाईं स्पेनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू पनि धेरै प्रसिद्ध छन् ब्रुनेट, म्याड्रिडको प्रान्तमा, र कोर्बेरा डी एब्रो, Tarragona मा।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई संसारका केही प्रख्यात छोडिएका शहरहरू देखाइदिएका छौं। यद्यपि त्यहाँ अरु धेरै छन्। उदाहरण को लागी, कल शहर १ 404जसको नामसमेत थिएन किनकि यो गोबि मरुभूमिको बीचमा चीन सरकारले आणविक बमका साथ परीक्षण गर्न जाँदै गरेका मजदुरहरूको लागि बनाएको हो। OR सेन्ट एल्मो, उत्तर अमेरिकी सुनको भीडको अर्को शिकार, र Epecuén, एक पुरानो अर्जेन्टिना पर्यटक गाउँ। त्यहाँ धेरै छन्, यदि तपाईं एक जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः यसलाई आफ्नै क्षेत्रमा पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » परित्याग गरिएका शहरहरू